MAQAAL CAJIIB AH:-Dowlad Qaran Mise Daba Dhilif cadow? | News From Somalia
Soo if bixi saxwadi islaamiga aheyd ee ay hogaaminayeen Midowgii maxaakimta Islaamiga, sanadki 2006 ayaa naxdin iyo argagax ku noqotay cadowga umada somaaliyeed oo ay hor kacayaan Yahuuda iyo Nasaarada.
Saxwadani ayaa waxay soo geba gebaysay 46 sano oo Cadaalad daro iyo dhaqan xumo ah.
Waxaa marki ugu horeysay taariikhda Soomaaliya la dhaqan geliyay shareecada Islaamka waxaa irdaha leysugu dhuftay xarumaha fisqiga iyo fasaadka sida shineemooyinka iyo goobaha daroogada lagu iibiyo.
Waxaa la furay Maxaakim dadka ku kula xukuma sharciga ALLE.
Waxaa dulmiga laga dulqaaday guud ahaan umada gaar ahaan dadki la yasi jiray oo hantidii laga dhacay dib loogu celiyay.
Waxaa wadanka ku soo batay madaarista Diiniga ah, shacabka ayaa dhinacooda bilaaway barashada Cilmiga sharciga ah oo ay waqti badan ka xarimnaayeen .
Waxaa hal mar horu kac sameeyay Ganacsiga Soomaaliyeed.
Amniga iyo kala dambeynti ayaa ku soo laabtay guud ahaan Koofurta Dalka.
Qabaa’ilka dega koofurta dalka ayaa ku naalooday Nabad iyo walaaltinimo taasoo keentay in qabaa’ilka dega W/galbeed iyo W/bari dalka iyagoon cidna qasbin codsadaan inay ku soo biiraan saxwada.
Qorshihii Maraykanka ee uu usoo wakiishay dagaalka Dowlada Itoobiya.
Cadowga Ummada ayaa fiirin kari waayay horumarka intaas la eg ee uu ALLE Saxwada ku siiyay muddo 6 bilood ah.
Ameerika oo ah madaxa kufriga Caalamiga ah kuna caan baxday la dagaalanka Diinta Islaamka ayaa durbadiiba bilawday inay abaabusho shirqool lagula dagaalamayo saxwadani barakeysan.
Itoobiya ayaa la maalgeliyay si ay ula dagaalanto horumarka umada gaartay iyadoo ku andacootay in ay taageerayso Dowladdi Cabdulaahi Yuusuf Madaxweynaha ka ahaa ee lagu dhisay Dalka Kenya 2004-ti.
Maraykanka ayaa Melis Senawe Ra’iislawasaarihii Itoobiya ee Xiligaas dhaqaale badan ku siiyay in uu Soomaaliya weeraro oo Maxkamadaha afka Ciidda u daro.
Waxaa isweydin Mudan goormay Itoobiya Gacal u noqotay Soomaaliya?, waxaa kale oo isweydin Mudan haddii Cabdulaahi Yuusuf iyo kooxdisi ahaayeen Dowlad Soomaaliyeed maxay Ciidamada Shisheeye u soo wateen oo ay dacmi uga helin shacabka soomaaliyeed?
Xabashida iyo Tigreegu Ciidamaday Hormuudka u ahaayeen waxay xasuuq ba’an ka geysteen Gudaha Dalka iyagoo isugu daray shacabka Musliimtaa ah dil iyo kufsi iyo boob hanta Burburin, Xarig iyo wixi la hal maala.
Tirada xasuuqa xabashida ku shahiiday ayaa gaareysa Kumanaan.
Dumarka la kufsadayna waa tira beel oo wax la soo koobi karo ma ahan, iyadoo Hantida ay xabashida, Tigreega iyo daba dhilifkooda dhaceen lagu qiyaasay Malaayiin Dollar.
Xad gudubka intaas la eg ayaa waxaa lagu geystay magac dowldeed.
Marka aanu is weydiino Ma Dowlad Qaran mise daba dhilif Cadow???
Shacabka Gumeysi diidka ah ee Soomaaliyeed ayaa si adag ula diriray Cadowga xabashida iyo Tigreegu Hogaaminayeen.
Baqtiga Itoobiyaanka Gaalada ah ayaa Xamar qurmiyay, gawaari badana waa laga gubay.
Itoobiya iyo daba dhilif C/llaahu Yuusuf ayaa ku fashilmay dhaqangelinta Mashruucii loo igmaday.
Saxwadi ayaa sii xoogeysatay oo ku fiday Gobolo badan,Waxaa lagama maarmaan noqotay in qorshihi hore la bedelo, waxaa leysla qaatay in saxwada lagula dagaalamo magac Diimeed.
Diinta oo lagula dagaalamo Magac diimeed iyo wadaado xumayaal.
Balcaam ibni baacuuraa(Shariif Sheekh Axmed)oo ka mid ahaa hogaanka saxwada ayaa dhabarka u ritay shirqoolkan cusub isagoo marin habaabiyay kuwa badan oo katirsanaa saxwada.
Shacabka Soomaaliyeed oo dhib badan horay uga maray shirqoolada noocan ah ayaa soo jeeday markaan.
Dagaal adag ayaa ka bilowday Xamar oo ALLE adoomadiisa ku guuleeyay, balcaamna Nasaaradi ALLE sokadii uu caabuday waxba uma tarin, waxaan Ceeb iyo liidnaan aheyna kama helin.
Asakrta Gaalada ah ee Ugandha iyo Burundi oo booski xabashida la geliyay ayaa Mujaahidiinta kala kulmay xanuun ka daran kii xabashida iyo saaxibadeed kala kulmeen.
Askarta Uganda iyo Burundi ayaa xasuuq ka daran kii Itoobiya ka geystay Muqdisho.
Balse Mujaahidiinta oo ka dhiidhiyay dhibaatada dadkooda ayaa weerar ay ku qaadeen Xarunta xalane ee Muqdisho ku laayay saraakiisha amartay xasuuqaasi intaas kuma ekaan ee intay duuleen ayay kampala ka geysteeyn mid la mid ah kan bakaaro ka dhaci jiray “فالدم الدم”.
Hirgalintii isku xukumida Shareecada Islaamka iyo la dagaalankii Shirkiyaadka.
Goboladi laga xoreeyay Nasaarada ayay Mujaahidiinta ka dhiseen wilaayaad Islaami ah.
Waxaa si buuxda loo dhaqan geliyay sharciga ALLE.
Waxaa la brburiyay qubuurihi la baryi jiray ALLE sokadii.
Waxaa si adag loola diriray dhaqan xumada iyo Maandooriyaha daroogada.
Waxaa si xowli ah uga socanayay wilaayaadka oo idil dawraad Diini ah oo dadka lagu barayo Towxiidka iyo xadiiska iyo fiqiga.
Cadaalad iyo Sinaan ayaa marki ugu horeysay shacabka wilaayaadka ku dhaqan ku naaloodeen.
Sakadi ayaa laga qaaday maal qabeenada oo loo qeybiyay walaalahooda fuqarada ah.
Nasaarada Uganda iyo Burundi ayaa soo dhaafi kari waayay km4 iyo villa Somalia ee Muqdisho waxayna cadeeyeen in ay fashilmeen una baahan yihiin kaalmada Dowladaha kale ee Gaalada gaar ahaana kuwa Soomaaliaya la diriska ah.
Waxaa la abaabulay olole sedaxaad oo ka adag kana balaaran kuwi ihore.
Waxaa la diyaariyay 3 abaabul.
1.mid Ciidan ah
2.mid amni ah
3.mid Warbaahin ah
Itoobiya ayaa dib loo amray in ay ku duusho Soomaaliya waxaa sidoo kale laga qeyb geliyay ololaha cusub Nasaarada Kenya iyo daba dhilifka Jabuuti .
Jabuuti oo ay Soomaaliyada kale waagii Gobanimo doonka wax walba oo ay awooddo ku taageertay si ay uga xorowdo Gumeysiga faransa maanta waxay la safantahay Cadowga Umada soomaliyeed ee Musliminta ah.
Turkiga oo aan ka xishoon dhibaateynta Umada Muslimka ah qeybna ka ahaa duulaanka saliibiga ku qaaday afghan Maantana dadaal adag ugu jira marin habaabinta jihaadka walaalahayiga suuriya ayaa loo xilsaaray xamlada amniga ah iyagoo saatir ka dhigtay magaca samafal isla magaca sama fal ayay Turkiga ku naafeeyeen Ganacsiga Soomaliyeed,iyagoo wadanka ka qeybiya cunto dhacday si ay hoos ugu dhigaan Sicirka suuqyada.
Turkiga waxa uu hagardaamada intaa la eg ah ugu fududeeyay Nasaarada si mar uun loo siiyo xubinnimada waxa loogu yeero Ururka Midowga yurub.
Ololaha dagaal ayaa waxaa barbar socday xamlad Warbaahineed oo la’aanteeda waxba soconeyn.
Waxaa xamar laga furay dhowr iyo labaatameeyo Idaacadood.
Waxaa sidoo kale London laga furay ilaa 8 satellite TV.
Idaacadahani iyo TV yadani ayaa shaqadoodu tahay in Gumeysiga loo sawiro inuu kaalmeynayo shacabka Soomaaliyeed,Mujaahidiintana laga suurad xumeeyo lagana dhigo Cadowga Umada,xaqiiqduse waa taa cagsigeeda.
Tvyadani kuwa ka shaqeeya ayaa kan ugu badan mushaharkiisu gaareen 200$
Kuwa TV yada ka shaqeeya oo lacag aad u yar ku gatay dadnimadooda ayaa sidoo kale looga fadhiyaa muqaabilka 200$ ay qaateen in ay Umada Muslimka ah baraan dhaqan xumada iyo qaawnaashaha iyo isdhexgalka Raga iyo Dumarka iyo waxa walbo oo anshaxa ku xumo ah.
Badalidii qaab dagaaleedka Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab.
Mujaahidiinta oo shirqooladaasi cadowga maleegayo xog buuxda ka helay ayaa go’aansaday in dagaalki foolka foolka ahaa u bedelaan mid ku dhufo ka dhaqaaq ah oo Cadowga Nasaarada ah weligoodna karayn in ay wajahaan.
Dhinaca kale mareykanka ayaa marki uu fashilmay qorshihi shariif go’aansaday in markaan howsha laga dhigo xoog iyo indha cadeys waxaa madaxweyne laga dhigay daba dhilif Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qofna ka war la’ayn waxa uu yahay.
waxaa sidoo kale Gudoomiye Barlamaan iyo R/wasaare laga dhigay kuwa sidiisoo kale Gaalada soo korsadeen.
Waxaa kumeel gaarnimada laga saaray Maamulka daba dhilifka taasoo looga gol leeyayah in la boobo kheyraadka dalka.
Daba dhilif Xasan ayaa ku faanay inuu qori jiray waxa dalka ka dhacay 22 sanoee dagaalka socday,waxaasa is weydiin mudan daba dhilif Xasan ma diiwaan geliyay wadaadihi Masaakiinta ahaa ee laga gatay asyaadiisa Ameerika mise wuxuu u arkaa injaaz.
Ma qoray xasuuqi iyo kufsiga ay geysteen walaalihiisa Xabashida mise kaalmada uu sheegay in ay xabashida noo fidiyeen 22ki sano ayaa taas ah?
Ma qoray xasuuqi Ugandha iyo Burundi geysteen mise kursigiisa ayuu weynayaa haduu ka hadlo?
Sida kuwa isaga ka horeyay marka la ceyriyo miyuu qiri doonaa in Dalku gumeysi ku jiro?
Goobaha ay ku sugan yihiin Nasaarada iyo daba dhilifkooda ayay caadi ka noqotay dhaca hantida shacabka iyo kufsiga Dumarka Cafiifaadka ah.
Dhaca iyo kufsiga ayaa gaaray heer Nasaarada waxa loogu yeero hay’aadka xuquuqul insaanka ay qireen in Boqolaal Dumar ah lagu kufsaday Muqdisho oo kaliya oo aysan ku jirin Gobolada kale.
Waxaa daba dhilif Xasan Sheekh Iska indha tiray in Shacabka Meelaha qaar ee Ciidamadiisa iyo kuw aGaaladu duulaanka ku tageen horay ay uga nabad qabeen dhibaatooyinka ay la derseen.
Dhinaca kale daba dhilif Xasan wuxuu shacabka ku eedeeyay in ay Alshbaab la shaqeeyaan kana war qabaan dhaqdhaqaaqooda isla markaana qariyaan waxa ay arkaan.
Waxaan leenahay run baad sheegtay ilaynn Alshabaab waa wiilashoodi ,waxaasa yaab leh sidey kuu doorteen shacab la shaqeeya Cadowga kaliya aad leedahay waa adiga boorarka ku qortay “waad ku mahadsantihiin inaad I doorateene” waxaad cadeysay in shacab ku dooran oo aad taangiga Shisheye ku joogtid Dalka.
Hadii ay Soomaali ku rabaan mar hore ayay ciidan kuu noqon lahaayeen umana baahateen Taangiga Shisheeye ee lagugu qaado.
Waa runtiis daba dhilif Xasan shacabka in ay Mujaahidiinta taageeraan maxaa wacay waa wiilashoodi oo ay iyaga soo koriyeen aslanna iyaga ayaa baray in ay sharciga ALLE u diriraan sida ay asyaadiisa u soo bareen inuu caksiga sameyo.
Talo usoo jeedin kuwa la qalday.
Kuwa aqaliyada ah ee marin habawsan waxa noocaas ahna ka sugaya Dowladnimo waxaan leenahay,
kala doorta kuwa idinla dhashay oo dhibta idinla qeybsanaya idina leh aan ku dhaqano sharciga ALLE iyo kuwa ku soo koray kalaabyada Yurub iyo Ameerika oo u socda dhaqan gelinta mashruuca kuwa ayaga kalaabyada ku soo koriyay.
Kala doorta kuwa gabdhihiina ugu yeeraya Xijaabka iyo Xushmada iyo kuwa ugu yeeraya qaawnaashaha iyo anshax xumada.
Kala doorta kuwa wiilashiina baraya diinka ALLE iyo dadnimada iyo in ay Difaacdaan sharafkooda, iyo kuwa ugu yeeraya dayuusnimada iyo heesaha iyo saqajaanimada.
Kala doorta kuwa intey duleen Uganda ku qarxiyay kuwa idinku laayay bakaaraha iyo gubta iyo suuqa xoolaha iyo kuwa dhilooyinka ugu geeya xalane kuwa idin laayay.
Kala doorta kuwa idinkugu yeeraya inaad dalkiina ka shaqeysataan isna kaalmeysaan iyo kuwa idin leh wax ba ma qabsan kartaan iyadoo Yurub iyo Ameerika idin kaalmeyn taasoo macnaheedu yahay Dalkiina idinkoo jooga adoon u noqda Gaalada.
Kala doorta kuwa ameerikaanki walaalihiin ku laayay Ciraaq iyo Afghanistan cadowga la ah iyo kuwa u daba dhilifeeya.
Kala doorta kuwa Rawaafida (Iraan)oo sharafka Nabigiina Muxamad (NNKH) ku xadgudbay Ciraaq iyo lubnaan iyo Yamana ku laayay walaalihiin ku soo dhaweeyay dalka iyo kuwa la dirirsan.
Kala doorta kuwa xabashida laayay iyo kuwa Gabdhihiina kufsaday Cadowgana u daba dhilifeeyo una aqoonsan iney yihiin walaalo iyo kuwa duurka ugu jira si ay idinkaga aar gooyaan waxa ay idin mariyeen.
Kala doorta in inaad Turkiga u noqotaan darawallo iyo ilaalo iyo in in aad Diinka ALLE u noqotaan Difaac.
Waxaan idin leenahay Diinkiina u soo laabta,
Waxaan shaki ku jirin in umadani xoroobi doonto Insha Allaah, weliba goor dhow Cadowga aad u garba qabateen waa laga saari doonaa Dalka.
Aan ku su’aalee Maalintaas hadaad Noolol ku gaarto Daba dhilofow Xageed aadi doontaa “u soo aroor Aadan yabaal Abaalna kuuma erganee”.
W/Q Nuur Axmad.
This entry was posted in Banaadir Post, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, Hassan Sheekh Mahamud, Ictisaam, Igad, ITOOBIYA, Kenya-Somalia, MAHIGA-UNPOS SOMALIA, Maleeshiyo Beeleed, Moqdisho, NO NGO FOR SOMALIA, Norway, QAADKA, Somali Media, Somalia, Tukiga, Turki & Itoobiya, Ugandha, Xasuuqa Amisom, Xasuuqa Kenya, Xasuuqa Maleeshiyo Beeleedka, Xasuuqa Xabashida!! and tagged Banaadir Post, Moqdisho, News From Somalia, Somalia. Bookmark the permalink.
Daawo naxdintan”Gabar Soomaaliyeed oo kaniisad dhexdeed lagu mehrinayo BIBLE”Dastuurka cusub ayaa ogol” waxaa yiri Xidhibaan Cusub!!